Kulanka 31-aad ee Golaha Shacabka oo qabsoomi la’ muddo ku dhaw hal bil – Kalfadhi
Kulanka 31-aad ee Golaha Shacabka ayaa maalinkii 8-aad baaqanaya, iyada oo ay Xildhibaannada Golaha Shacabkuna markasta ku celceliyaan inuu Guddoonka Goluhu Xildhibaannada u furo Golaha, si ay shaqadooda u bilaabaan.
Khilaafyo wajiya badan, oo uu midba mid kale ka dhashay, ayaa is hor tag ku noqday inuu Golaha Shacabku kulmo muddo celcelis ahaan gaareysa hal bil. Markii uu Guddoonka Goluhu hishiiyey, Mooshinkii ka dhanka ahaa Madaxweynahana uu buray, waxa ay Xildhibaanno badan u qaateen inuu Goluhu dib u bilaabayo shaqadiisa, mase dhicin taas ilaa maanta, oo ay ahayd inuu Goluhu kulmo.
Xildhibaan Cali Jowhar ayaa u sheegay Kalfadhi in, inkasta oo la xaliyo khilaafyo uu Guluhu ka shaqeysan kari la’aa, ay haddana wali taagan tahay arrinta Guddiga Maaliyadda oo ay hawshuu hayo tahay tan ugu horreysa ee uu Goluhu ka shaqeyn doono, maadaama uu sanadkan dhamaaday, oo aan la xisaab xirin Miisaaniyadda sanadkan, lana meel-marin tan sanadka soo socda.
“Waxay ahayd in ay kulmaan Guddiga Joogtada ah, si ay u diyaariyaan Ajandaha Golaha Shacabka la hor geynayo, laakiin wax kulan ah looma jeedo” ayuu Xildhibaan Cali Jowhar ku yiri Kalfadhi. Waxa uu aaminsan yahay in maalmaha ka haray bishan uusan Goluhu kulmi doonin, sida uu u sheegay Kalfadhi.
Xildhibaan Idiris Cabdi Dhaqtar ayaa, isaga oo 15-kii bushan ka hadlayey kulan xildhibaanno, sheegay in haddii uu Guddoonka Goluhu ku guuldareysto inuu u qabto kulamadoodii shaqada ee Xarunta Golaha Shacabka ay Xildhibaannadu ka tashadaan, sida uu hadalka u dhigay. “Haddii aan rabno in uu shaqeeyo Golaha Shacabka waa in aan talaabo ka qaadnaa cid kasta oo shaqada Golaha hortaagan” ayuu yiri Dhaqtar.
Kualamada Golaha Shacabku waxay dhacaan Sabti, Isniin iyo Arbaco, waxaana kulamada Golaha ee baaqday 2-dii bil ee ugu dambeysay ka mid ah kulamadii dhici lahaa 26-kii iyo 28-kii Nofeembar iyo 1-dii, 3-dii, 8-dii, 10-kii, 12-kii, 15-kii, 17-kii, 19-kii, 22-kii iyo 24-ka Diseembar oo maanta ah, waxayna u dhigantaa inuusan Golaha Shacabku kulmin muddo bil ah.